MR MRT: Good Friend - မိတ်ဆွေကောင်း
Good Friend - မိတ်ဆွေကောင်း (freefilehosting)
Posted by Ashin Acara. at 8:32 PM
Labels: 10. E-Series - E-စာစဉ်
Bliss of Us May 27, 2011 at 10:31 PM
ဘုန်းဘုန်းရဲ့ စာအုပ်လေးကို ထုတ်ပြီး ရလာတဲ့ ငွေကို ပရဟိတ တစ်ခုခုမှ ပြန်လှူနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ လျှောက်တွေးကြည့်မိတယ်ဘုရား။ ဘုန်းဘုန်း အချိန်ပေးရေးထားတာကိုလည်း အလကားဖတ်ရမှာ ရွံ့နေပြန်တယ်။ မရောက်တာကြာလို့ ဘုန်းဘုန်းနေကောင်းရဲ့လား လာကြည့်ရင်း စာအုပ်လေးကို လာငေးပါတယ်ဘုရား။
Ashin Acara. May 28, 2011 at 12:14 AM